စိတ်ကူး နဲ့ မု.ဒိ+မ်းကျင့်ခြင်းခံနေရတဲ့ဖာ… - UniqueZone Info
စိတ်ကူး နဲ့ မု.ဒိ+မ်းကျင့်ခြင်းခံနေရတဲ့ဖာ…
justin | August 25, 2021 | Knowledge, New, OMG | No Comments
(စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)
Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့့သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့
ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….
သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီရလို့ တဏှာရူးတွေရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ်
ညစ်ညမ်း မှုတွေအောက်မယ် သား မယား အဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ့မတို့အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူ ကြီး အဖြစ်ဖော်ပြလို့ မိမိရဲ့အမှားတွေကိုပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲမို့စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့် ခံနေရှာတယ်
အကိတ် အကိတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်စကားကြောင့်
မိန်းမသားတချို onlineကို ဘဝထင် ဆယ်လီဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရဖို့
အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ချွတ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေအတွက် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆယ်လီရူးတွေ များလာခဲ့တယ်
မင်းသမီးတွေက ဖော်ချွတ် ဆယ်လီရူး ငပိန်းမတွေက အကုန်ဖော်ထုတ်လို့
ဖာဆန်ဆန်စရိုက်ပျက်တွေနဲ့ onlineဆိုတာ သားကောင်ရှာတဲ့ ပုရိသကျားတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖာချစရာမလို Free မုဒိမ်းကျင့်လို့ရနေခဲ့ပြန်တယ်
ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေ နည်းတွေနဲ့ ပြုစား
အမြီးလေးနန့်အညှီအဟောက်ကြိုက်တဲ့ တဏှာရူး ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ အားပေးမှုအောက်မယ်
တော်တော်ခရီးပေါက်လို့ အော်…ငါ့ညီမလေးများကငွေပေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားဘဲ
ငါကတော့ Facebook ဆယ်လီကွ ဆိုတဲ့ မာန် နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် အလှဘုရင်မ တစ်ပါး လိုထင်ပြီး
Like တွေ ပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပန်းလေးတို့ရေ…
စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တွေ လေ့လာရမယ့်ချိန်like ပေးသူများ အတွက် cbမှာအချိန် ဖြုန်းလို့တစ်နေ့တာ online တက်ချိန် ညီမလေးတို့( ဘာ) ပညာတွေ တိုးပွားခဲ့လဲ?
တကယ်ခေတ်မှီပြီး ဆိုရှယ် ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက
မိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာဆေးခြယ်ပြီး သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး
ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ့ က online ကို
ဘဝအောင်မြင်မှု့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
ဆိုတာပဲ အဓိက ထားပြီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နည်းပညာ တွေ အာရုံထားတက်ကြတယ်
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေ က Online ပေါ်က လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂ သာယာမှု့ အတွက်
အစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ချနင်းပြီ ကျော်ကြားမှု့ ကို မမက်မောဘူး
မိန်းမသား သဘာဝ လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့စကား မိန်းမသားတိုင်း သဘောတွေ့ ပေမဲ့ အလှတရား ဆိုတာ ဘဝ တစ်ခုလိုသတ်မှတ်မထားဘူး မိန်းမသား တိုင်းရဲ့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့..လိုအပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် အလှချယ်သလို့နေထိုင်ကြတယ် မိမိ အလှကရမ္မက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်း မယူဘူး
ပုရိသ တွေ အတွက် စိတ်ကူးနဲ့တစ်ညအပန်းဖြေဖို့ အတွက် အလှပြင်တာမဟုက်ဘူး
နှာဘူးအကြိုက် လိုက်ပြီး မိမိ ရှိတာတွေ ဖော်ပြရင်တော့
ယောင်္ကျား သဘာဝ ပါးစပ်ကလေးစိုက် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီး
ရရင်အမြတ် မရရင် အရင်းဆိုပြီး ရိတဲ့တဲ့ အပြောခံအကြည့်ခံ
မစစ်မှန်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာနေပြီ မို့
ပန်းလေး တို့ရေ …
စိတ်ကူး နဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောက် စေနဲ့ကွယ်
အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ဇနီးသည်ကို ကွာရှင်းပြီး အသက်၄၇နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးကို လက်ထပ်ယူခဲ့သည့်ကောင်လေးကြောင့် လူအများမှ အံ့သြနေခဲ့ရသည့်အဖြစ်